Meizu POP Wireless iyo Halo Laser Earphones: Sameecadaha dhagaha | | Androidsis
Eder Ferreno | | Meizu, Qalabka kale
Meizu waxay durba si rasmi ah u soo bandhigtay taleefannadeeda cusub, oo ku dhex jira Meizu 15. Waad ka akhrisan kartaa dhammaan waxyaabaha ku saabsan tilifoonnada Halkan. In kasta oo qalabkani aanu ahayn kuwa cusub ee ay sumcadda Shiinuhu innaga tagto. Maaddaama ay iyaguna soo bandhigeen samaacaddadooda dhagaha. Ku saabsan yahay POP Wireless iyo Halo Laser Dhagaha.
Waxaan hor taaganahay laba nooc oo sameecadaha dhagaha la gashado, kuwaas oo u muuqda naqshadooda. Maaddaama Meizu uu doortay nashqad aan caadi ahayn oo ka mid ah 'POP Wireless iyo Halo Laser Earphones'. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale la yaabaan qiimo xoogaa sarreeya. Maxaan ka naqaanaa headphones-kan?
Waxaan hoosta kala hadli doonnaa kuwan POP Wireless iyo Halo Laser Earphones shaqsi ahaan. Marka waxaan ka ogaan karnaa wax badan oo ku saabsan waxa sameecadaha dhagaha ee Meizu ay bixiyaan. Shirkadda lafteeda ayaa si weyn ugu dhawaaqeysa. Marka rajo badan baa la saaray.
2 Meizu Halo Dhagaha Dhagaha
Waxaan ku bilownay headphones-kan, oo ahaa kii ugu horreeyay ee lagu dhawaaqo maalintooda. Sawirka waxaan ku arki karnaa naqshada ay leeyihiin. Isticmaalayaal badan, qaabkani wuxuu si uun u xusuusinayaa Apple Airpods. In kasta oo ay jiraan kuwa kale oo iyaguna arka saamaynta Samsung Gear IconX. Waxaan dhihi karnaa waa iskudhaf wanaagsan labadaba.
Waa laba sameecado oo sameecado leh oo u muuqda inay yihiin kuwo aad u fudud. Midkiiba culeyskiisu waa 5,8 garaam oo keliya. Waxay la yimaadaan kiis laba jibbaar ah. Sameecadaha dhagaha ee Meizu waxay leeyihiin batariga midkiiba 85 Mah. Waxay na siisaa ismaamul ugu badnaan 3 saacadood, ka badan ama ka yar. In kastoo haddii aan isticmaalno sanduuqa, is-maamulku si weyn buu u kordhayaa. Ilaa 12 saacadood, maadaama sidan oo kale, markaad isticmaaleyso sanduuqa, batterigu wuxuu noqonayaa 700 mAh.
Sanduuqa sanduuqyadan 'Meizu POP Wirless' waxaa lagu soo oogay iyadoo la isticmaalayo fiilo USB-C-USB ah. In kasta oo ay waliba suurtogal tahay in lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo xeedho wireless ah. Sameecadaha dhagaha ayaa isticmaala Bluetooth 4.2 waxaana lagu xakamayn karaa dareemayaal taabasho. Iyaga oo mahadsan ayey suurtogal u tahay in muusig la ciyaaro, heesaha la beddelo ama la hakiyo.
Tan ka sokow, adeegsadayaashu sidoo kale way wici karaan, waxayna sidoo kale isticmaali karaan kaaliyaha codka Meizu. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin IPX5 iska caabin dhidid, ku habboon isboortiga. Qiimaheeda, Kuwani Meizu POP Wireless waxay ku kaceen 499 yuan (65 euro si loo beddelo). In kasta oo ay suurtogal tahay in imaatinka Yurub qiimaha kor u kici doono.
Meizu Halo Dhagaha Dhagaha
Marka labaad waxaan helnaa qaabkan kale. Waxay suurtogal tahay inay tahay qaabka ugu cajaa'ibka badan labada nooc ee Shiinaha ay ku soo bandhigtay dhacdadan. Maaddaama ay leeyihiin fiilooyin isku xira iyaga, laakiin taasi way taagan tahay maxaa yeelay way shidan tahay. Tan waxaa suurta galiyay fiilooyinka 'Corning Fibrance fibers' oo leh diodyo ka socda OSRAM. Iyaga ayaa mas'uul ka ah gaaritaanka faafitaanka iftiinka.
Waxaa jira wadar ahaan seddex siyaabood oo xariggu u ifiyo. Iftiinka wuu sii ahaan karaa mid taagan, wuu birbiriirayaa dhowrkii ilbidhiqsi kasta ama xooggiisa waa la beddeli karaa iyadoo ku xidhan muusigga aad dhegaysanayso. Isticmaaluhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu go'aansado kiisaskan, noocyada nalka ee qalabka dhegaha ee Meizu uu doonayo inuu isticmaalo.
Si loo xakameeyo, isticmaalaha waa inuu ku soo dejisto codsi taleefankooda. Waad ku mahadsan tahay, nidaamka Bluetooth-ka ee ay leeyihiin Dhagaha Dhagaha ee Halo Laser-ka ayaa la xakameeyaa. Maxaa intaa ka badan, hayso batteri awooddiisu tahay 360 mAh. Haddii aan sidoo kale u isticmaalno shaqada heerka 50%, waxaan leenahay ismaamul 5 saacadood ah. Haddii ay dhacdo in la damiyo, is-maamulku wuxuu soo baxaa illaa 15 saacadood.
Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin aptX taageero si tayada maqalku had iyo jeer ugu fiicnaato. Waxay sidoo kale leeyihiin deked microUSB ah oo noo oggolaaneysa inaan ka qaadno iyaga iyo koontarool jireed oo nalalka lagu shido ama loo demiyo. Sameecadaha dhagaha ee Meizu waxay si muuqata uga qaalisan yihiin kuwii hore.
Xaaladdan oo kale, Qiimaheedu waa 999 yuan, taas oo isbeddelkeedu yahay 125 euro. Marka waxay ku kacayaan laba jibbaar kuwii hore. Intaa waxaa dheer, haddii laga bilaabo Yurub, sicirka ayaa u badan inuu xitaa ka sarreeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » POP Wireless iyo Halo Laser Earphones: Dhagaha dhagaha cusub ee Meizu